अनुहारमा मन्जन लगाउँदा हुने यस्तो चमत्कारिक फाइदा, जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ (विस्तारमा) – NepalNote
Jul 23, 2018 by nepalnote123	in ब्लग
मन्जन अर्थात् टुथपेस्ट एक सौन्दर्यको साधन हो जुन अनुसन्धानमा पनि पत्ता लागिसकेको छ। आज हामीले सुन्दरतालाई अझ निखार ल्याउन मन्चनको प्रयोग बारे बताउन गइरहेका छौँ।
अनुहार वा छालामा लगाउनको लागि सेतो रङ्गकै मंजन छान्नु आवश्यक छ। विशेषता (Teeth Whitening) अर्थात् दाँतलाई सेतो बनाउने मन्चन प्रयोग नगर्नुहोस्। मंजनमा के के सामग्री समावेश गरिएको छ, त्यो अवश्य पढ्नु होस्।
तपाइँले कोल्गेट वा बबुल प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। बबुलमा फ्लोराइड कम हुने हुँदा यो अझ लाभदायी हुनेछ।
मन्चन लगाउनु भन्दा पहिला छालामा लगाएर चेक गर्नुहोस्। किन की सेन्सीटिभ छालामा यो उपयुक्त हुँदैन।
मन्चन लगाउँदा अनुहारमा के के फाइदाहरु हुन्छ ? विस्तारमा विधि सहित बताउन गइरहेका छौँ।
१. डन्डीफोर हटाउन: यसका लागि सुरुमा एउटा सफा कचौरा लिनुहोस् र एक ठुलो चम्चा मंजन हाल्नुहोस्। अब यसमा आधा चम्चा मह हालेर मिसाउनुहोस्।मिसाईसकेपछी हातको औंलामा लिएर अनुहारको जहाँ जहाँ डन्डीफोर छ, त्यहाँ लगाएर २० मिनेटका लागि छोडीदिनुहोस्।
२० मिनेट पछी पानीले पखाल्नुहोस्। यस विधिलाई दिनमा एक पटक प्रयोग गर्नुहोस्।
२. ब्ल्याकहेड हटाउन: एउटा सफा कचौरामा एक ठुलो चम्चा मन्चन राख्नुहोस्। यसमा एक चम्चा नुन हाल्नुहोस्। अब यी दुई सामग्रीलाई राम्ररी मिसाउनुहोस्।यदि यो मिक्स्चर गाढा भएमा थोरै पानी पनि राख्न सक्नु हुनेछ।
यस मिक्स्चरलाई लगाउनु भन्दा पहिला बाफ लिनुहोस्, जसले अनुहारमा दाबिएर बसेको ब्ल्याकहेड माथि निकाल्न मद्धत गर्दछ।
त्यसपछि यस मिक्स्चरलाई लगाउनुहोस् र ५ देखि १० मिनेटका लागि छोडनुहोस्। अब विस्तारै अनुहारलाई रब गर्दै चिसो पानीले धुनुहोस्। अन्तमा अनुहारमा मोइचराइजर लगाउनुहोस्।
३. दाग्धब्बा हटाउन: यसको लागि एउटा सफा कचौरामा चाहिने जति मन्चन निकाल्नुहोस्। अनि थोरै दुध राख्नुहोस्।अब यी दुई सामग्रीलाई मिसाउनुहोस्। यस मिक्स्चरलाई अनुहारमा लगाएर ३० मिनेटका लागि छोडीदिनुहोस्। ३० मिनेट पछी पानीले धुनुहोस्।
४. कालो धब्बा हटाउन: एउटा सफा कचौरामा थोरै मन्चन र एक सानो चम्चा गोलभेंडाको जुस राखेर यी सामग्रीहरुलाई राम्ररी मिसाउनुहोस्।अब यस पेस्टलाई कालो धब्बा भएको ठाउँमा लगाएर २० मिनेटका लागि राख्नुहोस्। २० मिनेटपछी अनुहारलाई पानीले धुनुहोस्।